BBC Somali - Ganacsi - Ganacsiga
2 June, 2010, 16:54 GMT 19:54 SGA
Saaxiib u dir
Daar noocyada kale ee Maqal/muuqaal
Warshada kalluunka ee Laasqoray oo ay lahaan jirtay dowladii hore ee Somaliya, sanadkii 2000 ganacsato Soomaali ah ayaa dayac tirtay warshada Laas qoray oo soo saari karta ilaa lix tan oo kalluun maalintii, waxayna ku tala jirtaa inay soo saarto 40 tan oo kalluun maalintii.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi maamulaha warshada kaluunka ee Laasqoray, wuxuu ka mid ahaa ganacsatadii ka soo qayb gashay shirkii Soomaalida ee lagu qabtay dhawaan Magaalada Istan bul ee dalka Turkiga Yusuf Garaad ayuu uga waramay warshada.
Koronto la'aan ka jirta Nigeria
Labnaan oo badbaadisay internetkeeda
Mashruuc koronto ee Itoobiya oo shaqo bilaabay
Weriyayaal lagu xukumay Muqdisho
Madaxa Ikhwaanka oo maxkamad la soo taagay
Shuruudda wax raadinta: bbc.co.uk navigation Boggaga kale ee BBC Boggaga Englishka ee BBC: Three navigation lists follow: News Sport Weather Languages TV Radio Isku xirayaasha BBC Mobile ahaan Shuruudaha adeegsiga Ku saabsan BBC Nagu xayaysiiso Siyaasadda xog dhowridda Caawinta adeegga La xiriir BBC BBC © 2013 BBC mas'uul kama aha waxa ku qoran boggaga aan BBC ahayn. Boggan waxaa sida ugu wanaagsan loogu daalacan karaa qaab waqtiga la socda iyadoo la adeegsanayo waraaqaha qaabaysan ee (CSS). Adigoo awoodi doona in aadqaabka aad hadda isticmaalayso ku aragto bogga waxa ku qoran, hadana si buuxda ma kuugu muuqan doono. fadlan ka fakar in aad badasho barnaamijkaaga wax baaridda (browser) ama in aad kordhiso awoodda waraaqaha qaabaynta ee (CSS) hadii aad sidaa yeeli karto.